Maxaa ka Qaldan Sharciga Doorashooyinka Qaranka ee Heer Federaal? | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha shacabka (GSH) waxuu ansixiyay 28/12/2019 halka Aqalka Sare (AS) uu meelmariyay 08/02/2020 kedibna waxaa saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 21/02/2020.
A) Cabashooyin (complaint) – waxaa soo gudbinaya wakiilada xisbiyada ama codbixiyayaasha iyadoo qoraal ah , kedib waxaa go’aan ka gaaraya GMDQ. Go’aanka ay gaaran gudiga waxaa rafcaan looga qaadan karaa maxkamadda sare ee dalka muddo afar iyo toban (14) maalmmod gudahooda.
Tusaale ahaan , hadii ay doorashada ka dhaceyso gobolka Gedo ama Bari , ay wakiilada xisbiyada ama codbixiyayaasha rabaan inay ka qataan rafcaan go’aanka GMDQ , waa inay ku garaan maxkamadda sare dalka muddo 14 maalmood ah , iyadoo usbuuci hal mar diyaarad tagto goboladaas , waa waxaan dhici Karin dhab ahaan.
Sharciga doorashoyinka 1963 waxuu awood u siinayay maxkamadda gobolka inay go’aan ka gaarto dhamaan dacwooyinka la xiriira doorashada degaankeeda. Sharcigii 1963 dii waa mid waaqaci ah halka sharciga doorashoyinka uu yahay mid abuuraya xaalad adag iyo in la gaari waayo cadaaladda.
Dhamaan qaladaadkan ku jira sharciga doorashoyinka qaranka heer federal, waxay mugdi gelinayaan in dalka Soomaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah,xataa hadii la sameeyo muddo kordhin 13 bilood ah ama laba sanno, waayo GMDQ waxaa hor yaalla arimo farsamo sida; in tiro koob rasmi ah la sameeyo dalka oo dhan, sixitaanka sharciga doorashoyinka heer federaal, dib u eegidda metelaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare, ansixinta sharciga jinsiyadda Somaliyeed iyo abuuridda jawi wada shaqeyn ay yeeshaan GMDQ iyo dawlad goboleedyada. Waxaa intaas dheer, GMDQ oo muddo xileedkiisa dhamaanayso July 2021, taas oo dhalinaysa in loo baahdo in guddi cusub la magacaabo waxayna qaadan karta sannado. GMDQ looma kordhin karo waqtiga , sidoo kale lama dooran karo mar kale, sida ku cad sharciga dhisidda gudiga doorashooyinka qaranka.